तपाईको फेसबुक ह्याक त भएको छैंन ? कसरी थाहा पाउने जानी राखौं । - Hotpati
तपाईको फेसबुक ह्याक त भएको छैंन ? कसरी थाहा पाउने जानी राखौं ।
सम्वाददाता प्रकाशीत मिति:6Mar, 2018
६. त्यसपछि फेसबुकले तपाइँको अकाउन्ट सुरक्षित बनाउन अनुरोध गर्नेछ । र, आफ्नो अकाउन्टलाई सुरक्षित तथा बलियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नेछ । तपाइँले आफ्ना फेसबुक लगइन भएका डिभाइसहरुको नामको छेउँमा लग आउटअप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ । साथै सूचिको अन्तिममा सबै डिभाइसबाट एकसाथ लगआउट गने अप्सन पनि हुन्छ ।
९ महिनाभित्र सार्वजनिक यातायातमा ‘जिपिएस’
कोरियामा स्पाइ क्यामेराको प्रयोग गरी गोप्य भिडियो खिच्ने पक्राउ